भाइरल बाजेको घरमा चल्यो रुवाबासी ज्यान बचाइदिन आग्रग कस्लाइ के भयो ? भित्री पिडा रुन मन लाग्ने(भिडियो हेर्नुहोस) « Mom Nepal
भाइरल बाजेको घरमा चल्यो रुवाबासी ज्यान बचाइदिन आग्रग कस्लाइ के भयो ? भित्री पिडा रुन मन लाग्ने(भिडियो हेर्नुहोस)
युवती बिचको बिबाहले जताततै चर्चा चुलिदै गएको छ । धेरैले माया प्रेममा उमेरले छेक्दैन भनेका छन भने धेरैले सम्पतिका लागी ती २१ बर्षकि युवती ६८ बर्षका वृद्धसंग बिबाह गरेर आएकी भनेका छन । सम्पतीका लागि ती युवती भन्ने लागेकालाइ पनि अचम्म लाग्ने बास्तबिकता रहेको छ । ती वृद्धका घरमा दुई छाक खान लाउन पनि पुग्ने सम्पती छैन ।
धेरै नै गरिबीमा परेका वृद्धले आफ्ना नाती नातिनिको बिजोक देख्न नसकेर बिबाह गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । घरमा कोहि काम गर्ने नभएपछी वृद्धले नै सबै थोक गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । साना साना नाति नातिना र वृद्ध मात्रै बस्ने घरमा बिजोक नै थियो भन्छन वृद्ध । उता युबतीको पनि पहिले नै एकजना युवकसँग बिहे भएको र उसले छाडेर गएपछी बेसाहारा भएकी युवती जसको एउटा हात नै छैन ।
हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन । वृद्धको घरको अवस्था धेरै नै बिजोक रहेको छ । उनिहरुले आफुहरुलाइ सहयोग गर्न अपिल समेत गरेका छन । दुई श्रीमतीले छाडेर गएका र दुई श्रीमतीको निधन भएको भावुक हुँदै सम्झिए । पाचौं श्रीमतीसंग अब जीवन बिताउछु भन्दै अङालो नै हालेका वृद्ध भाइरल जोडिका छोरा एक्कासि रुदै मिडियामा आएका छन ।एकाएक अस्पताल पुगेका जेठा छोराले अस्पतालबाटै रुदै तीन करोड नेपालीको मनै छुने यस्तोसम्म भनेका छन । तलकोतलको भिडियोमा हेर्नुहोला मन रुनेछ